Tady avo lenta hareza
Concertina Razor Wire, antsoina koa hoe Razor Wire. Amin'ny maha-sakana fiarovana mahomby sy ara-toekarena anao, mampiasa lelam-by vita amin'ny vy nandrakotra ny tariby misy fotony. Miaraka amin'ny fiangonan'ny fiangonany avo lenta, Skyhall Concertina Razor Wire dia afaka misoroka ny ankamaroan'ny fitsabahana satria sarotra sy mampidi-doza ny miditra ao aminy. Miaraka amin'ny Concertina Razor Wire eo an-tampon'ny fefy hafa dia afaka manatsara ny singa azo antoka izy io. Ny iray amin'ireo singa manandanja dia ny vidiny ambany. Malaza eo amin'ny tsena afrikana izy io, vokatra amidy ihany koa amin'ny ankamaroan'ny firenena sy ny faritra.
Fitaovana: tariby GI mafana anaty rano, tariby Elector GI, tariby SS, tariby mifono PVC.
Fitaovana: tariby vy misy karbaona antonony, ravin-koditra mihodina.
Karazana: Mizara ho linear, crossover, coiling linear, coiling cross ary cross.
Endri-javatra: fahaiza-miaro matanjaka sy fahaiza-manao fandrahonana, fametrahana tsara, androm-piainana maharitra
2.5mmx2.5mm, 2.5mmx2.0mm, 2.0mmx1.6mm, 2.5mmx2.2mm, sns
Vita: electro nandrisika, Hot naroboka nandrisika, PVC mifono
Fampiharana: ampiasaina amin'ny fisarahana sisin-tany, tobin'ny miaramila, fonja, villa, toby miaramila, fiarovana ary fiarovana fiarovana toy izany.
Fanamarihana: ny halavany, ny savaivony dia azo atao arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Quote ilaina data: fitaovana + hateviny + savaivony tariby fototra + halavan'ny lelany + habakabaka + fonosana
> Fiarovana avo, saika tsy azo atao ny mianika.
> Hery lehibe vy tena sarotra tapahina.
> Sakan'ny fefy fiarovana matanjaka ny fisehoana madio.
> Tsotra be raha apetraka, mila telo hatramin'ny efatra hametrahana bobongolo.
> Tsy misy fampiasana faharoa, ka tsy hangalarina izy.
> Anti-harafesina, fahanterana, sunscreen, toetrandro.
Welded Razor Welded
2) fonosana amin'ny kitapo tenona
3) Paleta hazo
Fampiharana: miaro ny fari-tanin'ny ahitra, lalamby, lalambe, sisin-tany, fantsom-panjakana, fotodrafitrasa.
Blade: lovia vy amin'ny alàlan'ny famolavolana indray mandeha na takelaka vy tsy misy fangarony
Tariby: tariby metaly nandrendrika mafana napetraka
Ny tariby Concertina na Dannert Wire dia karazana tariby misy tadiny na taratra hareza izay miforona ao anaty coil lehibe izay azo itarina toy ny concertina. Miaraka amin'ny tariby tsotra (sy / na taratra / kasety) sy pika vy, matetika izy io no ampiasaina hananganana vato misakana amin'ny tariby toy ny rehefa ampiasaina amin'ny sakana any am-ponja, toby fitanana na fanaraha-maso korontana.
Diameter ivelany ny coil No. Loop
Halavany mahazatra isaky ny coil
ara-nofo Tariby sy savony fototra nandrisika elektronika
tariby sy savoka matevina voafafy mafana
Tariby sy vy matevina vita amin'ny vy
PVC mifono vy tariby sy ny lelany
Tariby mirehitra nandrendrika mafana + milentika vy vy
Teo aloha: Mpamatsy tariby mihantona mainty
Manaraka: Fefy rohy sinoa mifono plastika
Concertina miaramila hareza tariby tariby
pvc mifono vy vidin'ny orinasa
tariby hareza konsérina